नेपाल आज | जन्तेबाख्रो खै ? (भिडियोसहित)
जन्तेबाख्रो खै ? (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
बारीको पाटोमा बसेर जन्तेबाख्रो खाने दिन सकिएका छन् । गाउँमा समेत पञ्चेबाजा झ्याइँझ्याइँ बजाएर जन्तेबाख्रो ख्वाएर विवाह गर्ने प्रचलन हराएको छ । बेहुलो अन्माएसंगै बेहुलाका घरमा हुने रत्यौली, खाँडो जगाउने सबै खालका मौलिक परम्परामा पूर्णविराम लाग्दैछ ।
गाउँबाट बढ्दो युवापलायनले मात्र हैन, मागी विवाह गर्नेहरु घट्दै जाँदा पनि यस्तो स्थिति आएको हो । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले सट्याकसुटुक विवाह गर्नेको संख्या उत्तिक्कै बढेको छ । अध्ययन, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन र शहर पस्ने त शहरकै ब्याण्डबाजामा रमाएर विहे गर्ने गरेका छन् । पार्टी प्यालेसमा शुभकार्य हुँदा गाउँका यी परम्परा विराना बन्दै गएका छन् ।
उसबेला विवाहका अवसरमा इष्टमित्र, आफन्तलगायत गाउँभरकालाई बोलाएर मीठो खुवाउने चलन थियो । जसलाई जन्तेबाख्रो, जन्तेभोज तथा भतेर भनिन्थ्यो । हप्तौंअघि आफ्ना आफन्त र नातेदारको घुइँचो लाग्थ्यो । काममा सघाउन घरगाउँलेको बाक्लो उपस्थिति हुन्थ्यो ।
दोलखा झुलेकी ७५ वर्षीया मनमाया कार्की भन्छिन– ‘मेरो विवाहमा पहाडका गरा–कान्ला ढाक्ने गरी मान्छे ओइरिएका थिए, भतेर खान ।’ विवाह पनि कुम्ले र बरियाँती दुईथरि हुन्थ्यो । कुम्ले विवाहमा बाजा बजाइँदैनथ्यो । सानो उमेरमा विहे हुने भएकाले विहेपछि बेहुलीलाई माइतीमै छोडेर फर्कने चलन रहेको ८२ वर्षीया ईश्वरी बराल बताउँछिन् । उनी भन्छिन– ‘त्यो बेला भोटो खोलेर विहे गरिदिन्थे । विहे भन्ने थाहै हुँदैनथ्यो । म त विहेपछि पनि दुई वर्ष माइतै बसेकी थिएँ । विहेमा घरआँगन ढाकेर मान्छे आएको मधुरो सम्झना छ । पाहुनापासा त कति हो कति । भोजभतेरको त कुरै नगरौं । मासुभात त छाकैपिच्छे ।’ ">
उबेला भतेरमा मसिनाको भात, खसीको मासु मात्रै हुन्थ्यो । त्यसबेला पहाडमा माछामासु खाने अवसर दसैंमा मात्रै जुट्ने भएकाले, मासुभात खानकै लागि भए पनि मानिसहरू टाढा–टाढाबाट भतेर खान आउँथे तर मासुभन्दा धेरै झोल मात्रै पथ्र्यो अधिकांशको भागमा र पनि त्यसको स्वाद कहाँ हो कहाँ ?
आधुनिक विवाहमा भतेर होइन रिसेप्सन पार्टी चल्छ । त्यो पनि स्टार होटल र पार्टी प्यालेसमा । घरैमा खसी काटेर ख्वाइने भतेरको चलन क्रमशस् हराउँदै छ । अचेल विवाहअघि ब्याचलर पार्टी, इन्गेजमेन्ट पार्टी, स्यंवरपार्टी र त्यसपछि रिसेप्सन पार्टी चल्ने गर्छ । जसमा सयौं परिकारका अलावा ककटेल, मोकटेल, सफ्ट ड्रिंक्सलगायत पेय सर्भ गरिन्छ ।
आधुनिक विवाह पार्टीको खानामा पुलाउ अनिवार्य हुन्छ । उहिले चामलको भातको स्थान पुलाउले लिएको छ भने पानी बराबर ड्रिंक्स सर्भ गरिन्छ । अहिले टिपिकल फुडभन्दा पनि आधुनिक विवाह पार्टीमा परिस्कृत परिकार राख्न चाहन्छन् । जस्तो कि– ग्रिल्ड फिस, चिकेन, मटनका साथै क्रिमी या क्लियर सुपका साथमा पास्ता, स्पगेटी, ममलगायतका परिकार लाइभ पाकिरहेका हुन्छन् । डेजर्टमा लाइभ जेरी, सेल, मालपुवाका अलावा कटफ्रुट्स, दही, केक, क्रिम कारामेल, चकलेट ब्राउनी, अमेरिकन ब्राउनी आदि प्रचलित छन् ।
जन्तेबाख्रो पञ्चेबाजा झ्याइँझ्याइँ